भन्सारको जागिर | मझेरी डट कम
kbs — Sun, 01/16/2011 - 13:26
भर्खरभर्खर अफिसमा काम गर्न सुरू गरेको त्यसमाथि पनि भन्सार अड्डामा । उसको खुसीको सीमा नै रहेन । यहीँ जागिर पनि आफन्त थिए र पाइयो नत्र कहाँ पाउनु ? आफन्त भनेर के गर्नु र । तीन महिनाको तलब आफन्तका साथी हाकिमलाई उहाँको घरैमा बुझाउनु पर्ने रे । अरू कसैले थाहा नपाउनु पर्ने रे । उसको हाकिमले जागिर दिनुअघि फोनमा हँसिलो स्वरमा सोधेको थियो । अर्थ बल्ल पो बुझ्यो उसले, ''तिमीलाई जागिर दिएर हामीलाई के फाइदा नि ?''
उसले जवाफ दियो, ''अब के गर्छस् त ? स्वतन्त्र भएर घुम्न, आनन्दले । साथमा बेरोजगार युवा जमात छँदैछ ।''
ऊ एक्कासि झस्क्यो । साथीको प्रश्नको झापडले उसको एकाग्रता भङ्ग भयो, ''के घोरिइराख्छस् ! कतै मीठामीठा योजना त बनाउँदै छैनस् ? भन्सारमा काम गर्ने योग्यता केके हुन् थाहा छ तँलाई ? फटाइँ, बठाइँ, ढटाइँ, झुटाइँ हुन् । अनि फुट, कुट र लुट हुन् । सोझोपन, इमान्दारी, सचाइ र पारदर्शिता चाहिँ अवगुण हुन् । खै तैँले गरी खालास् भन्ने मलाई विश्वास छैन ।''
शैक्षिक योग्यताले ग्रेजुएट पार गरे पनि व्यवहारिकतामा ऊ अन्डरग्रेजुयट नै थियो । त्यसमा पनि भन्सार अफिसको मामलामा त बिलकुल अनभिज्ञ थियो, भन्सार अफिसभित्रको तलदेखि माथिसम्मको शृङ्खलाबद्ध धमिलो सञ्जाललाई झण्डै दुई महिनासम्मको अफिस कार्यबाट पनि उसले त्यति राम्रो बुझेको थिएन । ऊभन्दा माथिल्लो एकजना अफिसर प्रायः हरेक दिन जस्तो उसको टेबुलको बाटो गरी सचेतनाका शब्दहरू उसको कानमा पारिदिने गर्थ्यो, ''विस्तारविस्तार सिक्दै जानुहुन्छ । पहिले सबै नौलो नै लाग्छ ।''
त्यो 'ऊ' पात्रमा भर्खर भर्खर जागिर खाएको जोस र उमङ्ग थियो । उसलाई अफिसको जस्तोसुकै जटिल कार्य पनि गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास थियो किनकि उसको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र राम्रै श्रेणीको थियो । उसको जोस, जाँगर र उमङ्गले उसलाई बारम्बार यही अर्ति र शिक्षा दिइरहने गर्थ्यो, 'तैंले इमान्दार, चरित्रवान र पारदर्शीको नमूना बनेर देखाउनुपर्छ । बुझिस्, भनी पछि गएर तँ पनि त्यस्तै भन्सारको हाकिम बन्नुपर्छ र अति राम्रा भाषणहरू गर्नुपर्छ ।''
''यी सबै वाइह्यात कुराहरू हुन् । गाँठ कमा गाँठ । मौका नचुका । यस्तो मौका पाएको छस् योजना बना । हाकिमलाई सहयोग गर् । उसका गुणहरूले व्यवहार र कामकाज झट्टै सिकिहाल् । त्यति पनि थाहा छैन तँलाई भन्सारमा के हुन्छ भनेर ?''
''सबै दिन सुन्ने मात्र गर्थ्यो । एक दिन त त्यसको पनि मुडअफ भएछ क्यार तपाईं ज्यादा बाठो बन्ने कोसिस नगर्नोस् । आँखा चिम्लिएर बस्ने गर्नोस् । त्यसैमा तपाईंको भलाइ छ । तपाईंउपर यहाँ प्रशस्त उजुरीहरू आएका छन् । हेर्नुहुन्छ ? पढ्नुहुन्छ उजुरीका बेनामी पत्रहरू ? ऊ त्यो र्‍याकमा गएर फाइल उठाएर यहाँ ल्याउनोस्'' भन्नुभयो । फाइलमा त एक दर्जनभन्दा बढी मेराउपर लेखिएका उजुरीका बेनाम चिठीहरू रहेछन् । म त छक्क परेँ । मैले हाकिमलाई भनेँ, ''यहाँ त घूसखोरी र कमिसनतन्त्रको अखडा नै रहेछ । एउटा बलियो सञ्जाल नै रहेछ सर् ।'' अनि त हाकिम झोक्किएर मतिर आँखा पल्टायो, ''खुब थाहा रहेछ तपाईंलाई । धेरै जान्ने नबन्नोस् दुःख पाउनु होला ।''
ऊ मौन नै रह्यो । ''बोल बोल मछली मुखभरि पानी'' को उखान उसमाथि चरितार्थ भयो । सबै साथीहरूको बीचमा ऊ अट्टहास हाँसो हाँस्यो, ''हा....हा....हा.....हा.... पहिलो तलबको रकम हा.....हा....हा......हा.....।''
एउटा साथीले अर्को साथीको कानमा सुटुक्क भन्यो, ''भन्सार अड्डाको जागिर । निक्कै हात पारेछ क्यार । 'साथी चाहिँको उत्साहित जवाफ उसको कानैमा पर्‍यो, 'होला होला । नत्र त्यसै किन त्यत्रो अट्टहास हाँसो हाँस्थ्यो र !''
''तपाईंलाई अलि गाह्रैजस्तो लागेको हामीलाई महसुस भयो । हामीले तपाईंलाई सजिलो गरिदिएका छौँ ।'' हाकिमले एउटा चिठी उसको हातमा थमाइदियो । चिठी खोलेर उसले पढ्यो । यो पत्र उसलाई जागिरबाट बर्खास्त गरिएको चिठी थियो । बर्खास्त गर्नाको कारण निम्न बूँदाहरूमा समेटिएका थिए ः (क) अदूरदर्शी रिर्पोटिङ (ख) अपारदर्शिता (ग) अनियमितता (घ) ज्ञान, सीप, कौशलताको कमी, सनातन भन्सार विधिमाथि अधिकतम हेलचेक्र्याईं, आदि ।
ऊ लुरूक्क र्फकने तर्खरमा थियो । र्फकनुअघि उसलाई एकछिन हाकिमलाई सोध्न मन लागेको थियो, ''अनि त्यो मेरा तीन महिनाको तलब नि सर् । त्यत्तिकैमा साथीहरूका मजाकका पूर्व बोलीहरूले उसलाई सयौँ सर्पलेझैँ डसे । अकस्मात डस्न आइपुगे । पहिले सुन्दा आनन्द लाग्ने ती शब्दहरू अहिले बिउँझैँ ऐँठन गरेझैँ हुनथाल्यो ः (क) ''अब मालामाल हुने भयो'' (ख) "अब यसले हामीलाई मान्छे नै गन्दैन ।" (ग) "यसलाई चढाइएका उपहार, नजराना, कोसेली राख्ने ठाउँ हुने छैन ।" (घ) अहिलेजस्तो गरी पछि त यो हामीसँग बोल्दा पनि बोल्ने छैन होला । (ङ) यसका घरका सबै सदस्यहरूको भन्सार छलेर ल्याएको, उपहार पाएको आफ्ना आफ्ना छुट्टाछुट्टै गाडी हुनेछन् । पैदल हिँड्नु भनेको उहिलेको कुरा हुनेछ होला यसका लागि । (च) यसले पछि गएर हामीलाई गन्नेछैन, बोल्नेछैन होला । यसको कैयौँ ठाउँमा घर र जग्गाहरू हुनेछन् होला । (छ) यसलाई त टेबुलमुनि र टेबुलमाथिबाट नोटको ओइरो लाग्ने छ होला । यो मालामाल हुने छ होला ।"
दुई हाइकु (यादहरू)
खाओ नेता हो,खाओ पालैपालो खाओ
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सन्देश फुकाएर
के के सुन्छु आजभोलि
किन होला मेरो रहर तिम्रो मनमा फुल्छु भन्छ
चार मुक्तक (हानाहान भो)